Dirmannaa Oromummaa Uummata Oromoo Waraanni Wayyaanee Itti Bobbaafamee Ardaaf Qe’eesaan irraa Baqqaafamaniif Ajjeffamaa Jiraniif Oromoof Saboonni Cunqurfamoo Impaayera Biyya Ethiyoopiyaa Sagaleen Addunyaatti Dhageesisuufiin Dirqama Namummaati | QEERROO
Dirmannaa Oromummaa Uummata Oromoo Waraanni Wayyaanee Itti Bobbaafamee Ardaaf Qe’eesaan irraa Baqqaafamaniif Ajjeffamaa Jiraniif Oromoof Saboonni Cunqurfamoo Impaayera Biyya Ethiyoopiyaa Sagaleen Addunyaatti Dhageesisuufiin Dirqama Namummaati
Posted on November 20, 2017 by Qeerroo
Waggoota dheeraaf afaan qawween ofiin bulli mootummaa wayyaanee Uummata Oromoof saboota Cunqurfamoo Impaayera biyyattii bitaa tuee bitaas jira. Har’as Waggoottan imimmaan Oromoo akka galaanaa dhangalaa’aa jiran keessa seennee jirra. Qe’een Oromoo goolii saamtota kaabaa saamtota TPLF tiin boohichaaf watwaannaarra oolaa jira. Guyyaatti lubbuun nama 5 giddu galeessaan baafamaa jira. Qe’ee Oromoorraa Oromoo gadaansisuun ardaan Oromoo samamaa jira. Qabeenyi uummanni keenya umurii guutuu dafqee horataa ture saamtota Wayyaaneen maqaa Liyyuu ayiliin bobbaafteen saamamaa jira. Hanga ammaatti Oromoonni 60000 (kuma dhibba ja’aa) ol ta’aan lafasaanirraa buqqaa’aa jiru. Lafa keenyarrattis du’aa jirra. Shiftaa Wayyaaneen Uummata Oromootti bobbaafte addunyaaf ifa gochuun dirqama namoomaa yeroo hinbarbaannedha.
Har’a ardaan Oromoo gosogosamee golgolaahuutti jira. Oroomoota lafarraa buqqaa’an mana jireenyaa dhabanii akka Sinbiraa ta’anii jiru. Golli Oromoo saamamee manni jireenyaasaa sharaaf kaartoonii ta’uun dararaamaa jirra. Har’a Oromiyaan isa kaleessaan olitti ciramaa jirti. Watwaannaaf gidiraan uummata Oromoo dabalaa dhufe. Oromoon nama qabeenya miliyoonaan horataa turetu daabboo harka namaa irraa Itti darbatamtu eeggachuutti jira.
Biyyi abbaa keenyaa Oromiyaan biyya hormaa ta’uuf deema. Harmeen Oromoo Harmeen Ulfi mandhee dhabdee kaartooniif sharaa baqaa jalatti dahaa jirti. Utuu jirruu jiruu dhabne. Utuu nagaa qabnuu halagaan nagaa dhabne. Waraanni maqaa Liyyuu Polisii guyyaa guyyaan Oromiyaatti siqee Uummata buqqaasaa jira. Lafa Oromoo guyyaatti yoo xiqqaate ardaan tokkotu shiftaa Wayyaaneen bobbaafteen qabamaa jira. Adeemsi waraana kun kan hindhaabbanne taanan waggaa muraasa booda Oromiyaan nii dhabamti.
Saamichaaf ajjeechaa suukaneessaa nurratti raawwatamaa jiruuf utuu dhaga’uu utuu arguu qaamni Uummata Oromoo jalaa callisee dhaggeeffatu qaama dhala namaaf naatoo hinqabnedha. Qaamni kamuu waa’een namummaa kan quuqu gocha Oromoorratti ta’aa jiru balaaleffachuu qaba. Yeroon keessa jirru yeroo hadhooftuudha. Hadhooftuun kun akka nurraa kaafamu dirqama keenya haa baahhannu.
Waamicha Oromummaa bakka maraa waliif haa goonu waliif haa dhageenyu, waliif haa dirmannu. Iyya Uummata keenya lafasaarraa buqqaafamaa jiruu haa dirmannuuf.
Oromoota ardaaf beenyaa isaanii dhabaa jiran akka waan lafa sumaaleerraa buqqaafamaa jiruutti lallabaamuu hinqabnu. Oromoon lafasaa dhabaa jira. Ardaasaa gadhiisee jireenya bosontuu jiraataa jira. Kanaaf haa dirmannuuf, yakkoota hamaa halagaan nurratti raawwachaa jiru balaaleffachuuf qaamni kamuu dirqama namoomaa sagalee mormii dhageessisuun Oromoo cina haa dhaabbatu. Akkasuma waan danda’uun Oromoo Oromiyaa jiraatuuf haa dirmatu.
Uummata Oromoo jireenya baqaaf biyyoota alaa keessa jiraataa jirtan, yeroon isin itti sagalee Uummataa ta’uun addunyaa roqomsiisaa turtan kan darbeef galata qabdu. Ammas Abbaan keessan mana ari’atamee akka Sinbiraa bakkee jiraataa jira. Harmeen keesaan bakkeetti ulfaan mana isheerraa ari’atamtee bakkeetti dahaa jirti. Ilmaan abbaa keessaniif qaamni dirmatu akka argamuuf sagalee keessan baasaa dirmadhaa! Hiriira nagaan addunyaan akka Uummata keenya cina dhaabbatu sagaleen nuu dirmadhaa! Sagaleen keessan dhukaasa ammayyaa ta’uu hubadhaatii saboota ollaa Oromoo saboota Cunqurfamoo impaayera biyyattiif waamicha taasisuun, saamicha lafaa Oromiyaa mormadhaa! Oromoon ajjefamaa jira, Oromoon waggaa 26 ajjefamaa turre addatti baroota dhiyoo asitti bifa addaan ajjeefamaa jirra. Adaraa namummaa, adaraa Oromummaa Oromiyaan akka dhaabbattee haftuuf sagalee nuu ta’aa!
Oromoonni kutaalee Oromiyaa mara keessa jirru haalli waliif dirmaannaa Uummata Oromoo akkaan kan nu boqochiisu ta’uunsaa nu boonsa. Akkuma waan qabdaniin Oromoota keessan manaaf ardaan gadhiisan cina dhaabbataa jirtan ammas diddaa gad jabeessaa! Sirna nama nyaataa Wayyaanee mormuun ajjeechaa suukanneessaaf, buqqaaatinsa lafa ofiirraa, saamicha qabeenyaa ofii mormachuudha. Waan ta’eef waan qabdaniif waan dandeessaniin wayyaanee ofirraa qorbaa’uun amma. Caasaalee wayyaanee biyya keessa jiran, godinaa aanaa, hanga gandaatti dhabamsiisuu, ofitti makuu. Qaamota habukaatoo Wayyaanee ta’anii dubbatan irratti tarkaanfii fudhachuun amma.
Qeerroo Bilisummaa Oromoof kanneen caasaa oliirraa hanga gadiitti ijaaramtanii jirtan. Sirna wayyaanee gaafa hongeessaa deemamu dhuunfachaa adeemuun amma. Mormiin amma gochuu qabnu “Mootummaa ce’umsaa nageenya biyyaa eegsisu kan hattoota Wayyaanee hidhuu danda’u akka nuuf dhaabbatu” gaafachuun addunyaatti lallabachuun amma. Qeerroo Bilisummaa Mooraa Yuunibarsiitii keessa jirtan. Hiriira mormii mata duree “Uummanni Oromoo dhala namaatii, Sinbira miti bakkee kan jiraatu” jedhuun saamicha lafaa nutti adeemaa jiru mormachuun amma. Yeroon nuti qabsoo xumuraa finiinsinee caasaa Wayyaanee waggoota dheeraaf dhiiga uummataa xuuxaa ture ofirraa konkolaachifnu yeroon nuti qabnu amma. Oromoon akka Sinbiraa manaaf ardaa utuu qabuu ardaasaa dhabee jiraachuun salphina keenya. Oromoon dargaggoota ykn Qeerroo miliyoonaan utuu qabuu lafasaarraa buqqaafamee hafuun nu Qeerroo har’aaf kolfa. Waan ta’eef diina innika keenya diina Oromoo Wayyaanee nagaaf tasgabbii laachuun Wayyaanee goobsuudha. Kanaaf yeroon mormii dhageessifnu amma. Lafarraa buqqaafamuuf qabeenya saamamuun nurraa dhaabbachuu qaba.
1 thought on “Dirmannaa Oromummaa Uummata Oromoo Waraanni Wayyaanee Itti Bobbaafamee Ardaaf Qe’eesaan irraa Baqqaafamaniif Ajjeffamaa Jiraniif Oromoof Saboonni Cunqurfamoo Impaayera Biyya Ethiyoopiyaa Sagaleen Addunyaatti Dhageesisuufiin Dirqama Namummaati”
Pingback: Dirmannaa-Oromummaa Uummata Oromoo Waraanni Wayyaanee Itti Bobbaafamee Ardaaf Qe’eesaan irraa Baqqaafamaniif Ajjeffamaa Jiraniif Oromoof Saboonni Cunqurfamoo Impaayera Biyya Ethiyoopiyaa Sagaleen Addunyaatti Dhageesisuufiin Dirqama Namummaati – OR